छिटोछिटो खाना खाने भुँडे
शुक्रवार, बैसाख ६, २०७६
जीतगढी विजयोत्सवको भव्य तयारी
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि थप एक अर्व ८१ करोड
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा सेना
सामुदायिक विद्यालयमा गाभिए निजी विद्यालय
फूलप्रसाद पशुपतिलाई चढाएर फर्काइने
छिटोछिटो खाना खाने मानिस भुँडे हुने र उसमा मुटुको रोग विकास हुने जोखिम पनि बढ्ने पाइएको छ । यति मात्र होइन मधुमेह र मस्तिष्कघातको खतरा पनि उनीहरूलाई बढी हुन्छ । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको हालै सम्पन्न साइन्टिफिक सेसनमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ अनुसन्धानको विवरणमा भनिएको छ– फटाफट खाना खाने गरेमा मुटु, रक्तसञ्चार र पेटमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ ।
जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयका हृदयरोग विशेषज्ञ डा. ताकायुकी यामाजीको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानमा पाँच वर्षसम्म हजार जना सहभागीको खाना खाने बानी र स्वास्थ्यमा त्यसको प्रभाव हेरिएको थियो ।
खाना खाने गति र मेटाबोलिक सिन्ड्रोम बीचको सम्बन्धमा अनुसन्धान टोली केन्द्रित थियो । हृदयरोग, मधुमेह र मस्तिष्कघातका जिम्मेवार मुख्य पाँच जोखिम पक्षसँग सम्बन्धित मेटाबोलिक सिन्ड्रोमलाई यामाजीको टोलीले विशेष रूपमा हे¥यो । ती जोखिम पक्ष थिए उच्च रक्तचाप, उच्च ट्रिग्लेसेराइड, रगतमा चिनीको उच्च मात्रा, राम्रो कोलेस्टेरोलको न्यून मात्रा र फुलेको कम्मर । यामाजीको टोलीले अनुसन्धानका लागि छानेका एक हजार ८३ जनामा ६४२ पुरुष थिए । सहभागीको औसत उमेर ५१ वर्ष थियो । सन् २००८ मा अनुसन्धान सुरु गरिँदा ती मानिसमा मेटाबोलिक सिन्ड्रोम थिएन । पाँच वर्षसम्म तिनको अनुगमन गरियो ।
पाँच वर्ष अनुगमन गर्दा ८४ जनामा मेटाबोलिक सिन्ड्रोम देखियो । समग्रमा छिटोछिटो खाना खाने मानिसको पेट लाग्ने, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्ने, हानिकारक कोलेस्टेरोल बढ्ने र तौल बढ्ने पाइयो । यस आधारमा अनुसन्धान टोलीले भनेको छ छिटोछिटो खाना खाने मानिसमा मेटाबोलिक सिन्ड्रोम विकास हुने जोखिम तुलनात्मक रूपमा दोब्बर हुन्छ । एजेन्सी
प्रकाशित मिति: २०७४/८/५
संविधान संशोधनको सकस
गुटमा खुम्चिँदै राजनीति
बजार अनुगमनमा गरिनुपर्ने काम
संविधान कार्यान्वयनको मार्ग
व्यक्ति स्वरोजगार नभए राष्ट्र समृद्ध हुँदैन ः महतो
पत्रकारिता क्षेत्र आवाज विहीनको आवाज बन्नुपर्छ – मन्त्री केसी
३२ वर्षदेखि अनुमतिबिना कोकाकोला कम्पनी सञ्चालनमा !!
आश्रित विधेयक संसद्मा पेस